विवाहकै दिन दु’र्घ’टना, जन्ती लिएर अस्पताल गएका बेहुलाले गम्भिर अवस्थाकी बेहुलीलाई बेडमै लगाइदिए सिन्दुर ! – AB Sansar
December 16, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on विवाहकै दिन दु’र्घ’टना, जन्ती लिएर अस्पताल गएका बेहुलाले गम्भिर अवस्थाकी बेहुलीलाई बेडमै लगाइदिए सिन्दुर !
एजेन्सी । तपाइले हिन्दी फिल्म हेर्ने गर्नुभएको छ भने २००६ मा, सूरज बड़जात्याले बनाएको फिल्म विवाह को बारेमा थाहा छ होला । जसमा दुलही बनेकी अमृता राव आफ्नो बहिनी नाता पर्नेलाई बचाउन आगोमा जल्छिन् । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि बेहुला बनेका शाहिद कपूरले उनीसँग विवाह गरे। यो रिलको जीवनको तस्विर हो जुन पनि ठूलो हिट थियो । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
तर वास्तविक जिवनमा यस्तो घ टना दु र्लभ हुन्छ । तर भारत यूपीको प्रयागराजमा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।
दुखद खबर: चाउमिन खाँदा एकै परिवारका ९ जनाको मृ’त्यु, नमिठो मानेर नखाने ३ जना बचे !